रामकृष्ण ढकालले निशान भट्टराई र प्रताप दासलाई मात्रै भोट माग्नुको कारण यस्तो छ। – Complete Nepali News Portal
रामकृष्ण ढकालले निशान भट्टराई र प्रताप दासलाई मात्रै भोट माग्नुको कारण यस्तो छ।
August 31, 2017	377 Views
काठमाडौं, भदौ । गायक रामकृष्ण ढकाल विवादमा तानिएका छन् । एपि वान टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ मा शुक्रबार अतिथी जज बनेर पुगेका ढकाल विवादमा तानिएका हुन् ।‘परिक्षा फल’ राउण्डमा जज बनेर पुगेका ढकालले निशान भट्टराई र प्रताप दासलाई मात्रै भोट मागेको भन्दै उनको विरोध भएको छ ।
सामाजिक संजाल प्रयोग कर्ताहरुले ढकाललाई गालि गरिरहेका छन् । उनी जस्तो बरिष्ठ गायकले एउटा प्रतियोगितामा गएर पक्षपाती ढंगले भोट माग्ने आशय व्यक्त गर्नु जायज नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।फेसबुकमा ढकाललाई गाली गर्दै रमित लामाले लेखेका छन्, ‘रामकृष्ण ढकाल मुर्दावाद भन्दा केही फरक पर्दैन मित्रहरु ।
जजमेन्टको तरिका त्यो होइन । त्यस्तालाई के को अतिथी जज ! ।’यस्तै युवाराज अधिकारीले पनि ढकालाई गाली गर्दै लेखेका छन्, ‘प्रतिष्ठित गायक भएरपनि हिजो रामकृष्ण ढकालले गरेको एक तर्फि प्रशंसाले बुझाउँछ की रामकृष्ण ढकालले दर्शक माझ बोल्न अझै धेरै सिक्न जरुरी छ ।
त्यो भन्दा बरु इन्दिरा जोशी र कालिप्रसाद बाँस्कोटाले ब्यालेन्स मिलाएर बोल्न जान्या छन् ।’ यस्तै पोस्ट मार्फत ढकाललाई धेरैले गाली गरेका छन् ।
के भनेका थिए ढकालले ? —-जब निशान भट्टराई र सुजता पाण्डेले ढकालको ‘बाचुन्जेलीलाई’ बोलको गीत गाए ।
तब उनीहरुको प्रस्तुतिमा कमेन्ट गर्दै ढकालले निशान र प्रताप आफुलाई मन पर्ने प्रतिस्पर्धी भएको बताएका थिए । र निशान र प्रताप कुनै पनि हालतमा बाहिरिन नहुने आशय व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तो थियो उनको कमेन्टः ‘निशान त राम्रो गाउँछ नै, सुजताले यस्तो गाउँछ जस्तो लागेको थिएन । तर राम्रो गायो । वास्तवमा दर्शक भनेको सबैभन्दा ठूलो जज हो ।
उहाँहरुले भोट गरेपछि टप फाइभमा तपाईहरु आउनु भएको हो । त्यसै आउनुभएको होइन । यो गीत मैले लता मंगेस्करसँग गीत हो । निशानले इफ्लाटमा पनि राम्रो गायो ।वास्तवमा सबैको आ–आफ्नो विषेशता छ । तर, मैले यहाँ आएर भन्नुपर्छ । किनभने म्यूजिकमा आउने मान्छेलाई गायकीको धेरै महत्व हुन्छ ।
मलाई गायकीको हिसाबमा सबै भन्दा मन पर्ने निशान हो । र, प्रताप दास पनि हो । दुई जना मलाई एक दमै बढी मन पर्छ । प्रताप दासको आफ्नो एउटा छुट्टै प्याकेज छ ।
तपाईको गायकी एकदमै मनपर्छ ।तपाईहरु जस्तो मान्छे प्रताप दास जस्तो मान्छे डेन्जर जोनमा पर्दा मलाई दुःख लाग्छ । हामीले बाँचुन्जेल त्यो प्रतिभालाई चिन्दैनौँ अनि मरिसकेपछि फलानो यस्तो उस्तो भन्छौ ।
बाँचुन्जेल केही भ्यालु हुँदैन । त्यसैले यो चिज तपाईहरुले याद गरिदिनुहोला ।प्रताप दास जस्तो मान्छे, निशान जस्तो मान्छे एलिमेनेसनमा पर्नु यो शोका लागि पनि दुःखत कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ । अर्को कुरा म हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई भोट गरौं भन्छु । तपाईहरु दुवै जना सुरक्षित होस् भन्ने कामना गर्दछु । निशानलाई एउटा भोट म पछि गर्नेछु । -साभार खबर संसारबाट |